Suncoast casino seranan-tsambo vaovao richey fl
suncoast casino steak sy ny atody
inona casino manana ny titanic slot machine
inona casino no tena slots
inona casino no tena slot milina any etazonia
Ny casino mpiasa' Culinary Union nikarakara hetsi-panoherana tamin'ny Las Vegas Strip eo amin'ny mazava ny casino orinasa namoaka mikasa ny hanokatra indray suncoast casino seranan-tsambo vaovao richey fl.
Ny hetsi-panoherana ihany koa ny natao mba hanasongadinana ny fiarovana protocol tolo-kevitra ny vondrona dia manolotra ihany koa araka ny fangatahana ho an'ny casino orinasa mba hamoaka ny vaovao ihany ry zareo naniraka dalàna. Izany dia ahitana tahirin-kevitra eo indray ny fanokafana ny drafitra-ny, ny fiarovana ny fitsipika, sy ny hafa ny angon-drakitra mahakasika ny fotoana asa. Ny hetsi-panoherana mitondra fiara dia ny mandeha avy amin'ny union foiben'ny ny malaza Las Vegas sonia. Ny governora Steve Sisolak namela ny Nevada Lalao fanaraha-Maso ny Solaitrabe ny manapa-kevitra raha ny re-varavaran'ny mety hitranga suncoast casino steak sy ny atody. Miaraka amin'ny Nevada Lalao ny Vaomiera, izay miandraikitra ny fitsipika sy ny fahazoan-dalana, ny Birao manaiky ny fitsipika ho an'ny indray ny asa. Izany dia ahitana ny disinfecting fitaovana, heba avy vahiny sy ny famerana ny mpitsidika inona casino manana ny titanic slot machine. Na izany aza, ny union fangatahana feno kokoa sy amin'ny antsipiriany ny drafitra ho namoaka.
Anisan'ireny ny COVID-19 fitsapana ho an'ny mpiasa, ny fanamarinana ny mari-pana teo amin 'ny fidirana, sy ny fangatahana dia ahitana tolo-kevitra fitsipika ao anatin' ny indray ny fanokafana ny fitsipika. Ny sasany trano filokana efa namoaka ny re-fanokafana ny drafitra inona casino no tena slots.
MGM Resorts drafitra ny re-fanokafana amin'ny endriny samy hafa isehoan'ny, ny Bellagio sy New York New York amin'ny maha-voalohany ny 13 MGM fananana mba hanokatra indray in Las Vegas. inona casino no tena slot milina any etazonia.
Inona casino no tena mpandresy